Xisbiga TPLF Ee Qoomiyada Tigreega oo ka Cabanaya Isbeddelada Ethiopia – Awdal State Economic and Political Council
[ July 13, 2018 ] Eritrea to Reopen Embassy in Addis Ababa	Somali News
[ July 10, 2018 ] Aayaha iyo xoriyada Awdal waa muqadas—–Hamid Masheye	Popular Videos
[ June 29, 2018 ] Koobka aduunka oo galay isreebkii kooxda lix-iyo-tobanka.	Wararka Soomalida
[ June 29, 2018 ] Germany’s VW opens Rwanda’s first car-assembly plant Somali News
HomeWararka SoomalidaXisbiga TPLF Ee Qoomiyada Tigreega oo ka Cabanaya Isbeddelada Ethiopia
Sida ay qortay Wakaaladda Wararka ee Associated Press, Xisbiga TPLF ee qowmiyadda Tikreyga dalka Ethiopia ayaa ku baaqaya in kulan degdeg ah la iskugu yimaaddo. Xisbiga ayaa sheegay in isbeddelada toddobaadkii uu Ra’iisal Wasaaraha dalku ku dhawaaqay ay meel mareen iyada oo si wadajir ah looga tashan.
Dhinaca kale, Ra’iisal Wasaare Abiy Axmed ayaa dalal dhowr ah booqasho ku tagey.
Haddaba isbeddeladan dhinaca siyaasadda iyo cabashada ka timid iyo waliba ujeedada booqashooyinkii u dambeeyey ayaa Maxamed Cabdi Sandhere uu ka wareystay Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah Guddoomiyaha Isbahaysiga Caddaaladda Deegaanka Soomaalida, kuna sugan gobolka MN ee dalka Maraykanka.
Maxamed waxa uu marka hore ka hadlayaa booqashooyinkii uu RW-e Abiy dhawaan ku tagey dalalka Ethiopia dariska la ah.
Ciidamad dowladda oo xalay toogasho ku dilay qof ka tirsanaa Ururka Al-shabaab magaalada Beledweyne
Baayacmushtarka Hubka ee Geeska Africa (The arms trade in the Horn of Africa)
Eritrea to Reopen Embassy in Addis Ababa
Archives (Keeydka) Select Month August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016